Mapombi anonamira anogona kurayirwa zvichienderana nekutara kwevatengi.
Zvikamu zvakasiyana-siyana zvekupwanya zvinogona kurairwa zvichienderana nekutora kwevatengi.
Iyi clamp ine maviri mabhende e20mm uye 32mm.Iko kune ese iron galvanized uye ese 304 zvigadzirwa.
British mhando hose inodzivirira neyekushongedza
Pasi pekugara kweBritish mhando hose clamp ine welding iri kututira.
V-bheji machira anogadzirwa nesimbi yakakosha masimbi ekumisa, yakanaka yekudzivirira kutu.Iiyi clamp inonyanya kushandiswa nema flanges, flanges ehukuru hwakasiyana haakwanise kushandisa iyo imwecheteyo groove, kana kuvuya kuchaitika, saka kubvunza kunoda kupa mafirange kana girovhoti zvokudhirowa.
Iyo inoshandiswa kubatanidza kuburitsa kweiyo turbocharger uye iyo inopedza pombi yemotokari. Izvo zvinogona kudzivirira iyo supercharger kuti iwedzerwe uye iyo vibration yakakuvadzwa uye supercharger kushushikana.
Uniaural isina-polar hose clamp
Uniaural isina-polar hose clamp chigadzirwa ndeye 304 chete zvinhu, izvo zvinopa zviri nani kudzora kutu, uremu huremu uye nyore kuisirwa.
Pamberi pacho U-yakamisikidzwa clamp isati yaunganidzwa pandiro yekuchenesa, kuti uone zviri nani kutungamira kwechisipiti, zvinokurudzirwa kuisa chiratidzo panzvimbo yekugadzirira, weld wobva watema chisimbiso, uye woisa chikamu chepazasi chemutumbi unonamira pombi. uye pfeka kune iyohubhu, isa imwe hafu yehubhu clamp uye chifukidzo, uye simbisa ne screws. Rangarira kurongedza zvakananga iplate yepasi pombi.
Yakapetwa gungano, iyo yekufambisa njanji inogona kuturikwa pane hwaro, kana yakagadziriswa nemavara.
Kutanga isa kumusoro uye yakadzika hafu yepombi pombi muviri, isa pombi kuti igadziriswe, wozoisa iyo yepamusoro hafu yepombi mutumbi muviri, gadzirisa nemavara, kuburikidza nevharo rekuvhara kuti isatendeuka.